नुहाउनसाथ गर्ने यी गल्तीहरु जसले कपाल झार्छ
हामीमध्ये अधिकांशलाई कपाल झर्ने समस्या हुन्छ । यस्तो समस्या विभिन्न कारणले हुन्छ । कसैको कपाललाई पोषणको कमि हुँदा यस्तो समस्या आउँछ भने कतिले आफ्नै लापारवाहीले यो समस्या जन्माउँछन् । कपाल नुहाएपछि हामीले गर्दै आइरहेका केही दैनिक अभ्यासले हाम्रो कपाल झर्ने समस्या उत्पन्न गराउँछ । यी गल्तीहरु छन् जसले कपाल झर्ने समस्या निम्त्याउँछ । नुहाएपछि चिसो […]
हाम्रो स्वास्थ्यमा हुने एलोभेराका वेफाइदाहरु
सामान्यतय हामीले एलोभेराको फाइदाबारे मात्र सुन्दै आएका छौं । तर के तपाईले यसबाट शरीरमा पर्ने नकरात्मक प्रभावबारे सुन्नु भएको छ ? विभिन्न समस्याका लागि रामबाण साबित हुने एलोभेराका पनि धेरै वेफाइदाहरु छन् । एलोभेरामा पाइने लैक्सेटिवले तपाईलाई विभिन्न नकरात्मक प्रभावहरु पार्न सक्छ । एलोभेरा छालाका लागि वरदान सावित हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा यसको प्रभाव उल्टो […]
दाँत सफा राख्ने हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ । तर चाहना भएतापनि सफा राख्न सकिरहेको हुँदैन । हामी दाँत सफा राख्नको लागि दिनमा दुईचोटी ब्रस गर्छौं । तर पनि सफा हुदैन । दाँत सफा राख्नको लागि हामीले ब्रस गर्ने मात्र होइन । खानामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । स्ट्रवेरी स्ट्रवेरीको प्रयोगले दाँतलाई बलियो र सफा राख्न […]
ब्लड प्रेसर हाई भएका ब्यक्तीहरु चिसो मौसमवाट बाच्ने उपायहरु
हाई बीपी हृदय रोगको इशारा हुन सक्छ । डायटमा सैचुरेटिड फैट जस्तो कि मक्खन, घ्यू, तर आदि कम गर्नुस् । किनकी यसले मुटुको नली बन्द हुने खतरा बढ्छ । जति सकिन्छ, लो फैट डायट लिनुस् । कैल्शियम, मैग्नीशियम र पोटैशियम आदि प्रचुर मात्रामा खानुस् । यो तत्व दूध, हरियो साग, सब्जीहरू, दाल, सुन्तला, स्ट्राबेरी, बदाम, […]
ज्वानोवाट हाम्रो स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरु
ज्वनोलाई हामी खानपानमा बढी प्रयोग गर्ने गर्छौं । स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्वनोका अनेक चमत्कारिक औषधीय गुणहरु छन् । ज्वनो एक फाइदाजनक र गुणकारी मसला हो । ज्वनोमा क्याल्सियम, पोटासियम, फस्फोरस, आयोडिन र क्यारोटिन नामक तत्व पाइ न्छ । जुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदम फाइदाजनक छ । आयुर्वेदका अनुसार ज्वनोले पाचनलाई राम्रो बनाउँछ । यसको सेवनले पेट […]
ल्वाङ चियाका फाइदाहरु
चिया हाम्रो संस्कार हो । अधिकांश नेपालीलाई बिहान उठेपछि एक कप चिया पिउनैपर्छ  । अझ सहरी क्षेत्रमा त भेटघाट वा छलफलमा चिया बहाना नै बन्ने गरेको छ  । तर, चिया बढी पिउँदा त्यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ  । यद्यपि, शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउने चिया पनि छन्  । जसमा एउटा पर्छ, ल्वाङ चिया  । ल्वाङवाला चिया अदुवा […]
बेलुकाको खाना ढीला खानुका बेफाइदाहरु
स्वास्थ्य जीवनयापनका लागि राती ८ बजेभन्दा अगाडी नै खाना खानुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । अहिले बदलिंदो समयसँगै मानिसको जीवनशैलीमा पनि तिब्र रुपमा परिवर्तन आइरहेको छ । पहिले पहिले मनिसहरु बिहान छिटो उठ्ने गर्थे र राति छिटो सुत्थे, तर अहिले राति ढीला सुत्ने र विहानपनि ढीला उठ्ने बानी आधुनिक जीवनको पर्याय जस्तै बनेको छ । यसरी राति […]
बिहान खाली पेटमा खानै नहुने कुराहरु
स्वस्थ रहन चाहिने पोषकतत्व खाँदा समयलाई ध्यान दिएर खाएन भने यसले शरीरमा फाइदाको सट्टामा हानी पु–याउने खतरा बढी हुन्छ । बिहान उठेपछि खाली पेटमा एसिडको मात्रा अत्याधिक हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा बढी एसिडिटीयुक्त खानेकुरा खाँदा शरीरको पाचनशक्तिमा गढबढ आउँनसक्छ। विहान खाली पेटमा खान नहुने कुराहरु ग्रीन टी वा चिया धेरैजसो व्यक्ति विहान उठेपछि ग्रीन […]
बिहान मनतातो पानी पिउँदाका फाइदाहरु
आयुर्वेदमा मनतातो पानीका विभिन्न फाइदा बताइएको छ । मानिसले बिहान उठ्ने बित्तिकै एक गिलास मनतातो पानी पिउनाले मेटोपना घटाउनेदेखि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट टाढा राख्न मद्दत गर्छ । दैनिक मनतातो पानी विहान खाली पेटमा पिउँदा फाइदाहरु दैनिक बिहान मनतातो पानी पिउँदा शरीरको फोहोर बाहिर निस्कने गर्दछ जसका कारण मृगौला सम्बन्धि रोग लाग्नबाट जोगाउँछ । दैनिक बिहान […]
जानिराखौं, बिहानै उठेर ऐना हेर्नु शुभ कि अशुभ ?
बिहानै उठेर ऐना हेर्ने बानी छ ? होसियार यसकारण अशुभ हुन्छ हामी बिहान जुरुक्क उठ्ने वित्तिकै ऐना हेर्ने गर्छौ तर यसरी उठ्ने वित्तिकै ऐना हेर्नु राम्रो हो कि होइन, तपाई हामी धेरैलाई यसबारे जानकारी नहुन सक्छ । विहान उठेसँगै के गर्दा स्वस्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ त ? बुढा पाकाहरुले जीवनका बारेमा भनेका कतिपय कुराहरु बैज्ञानिक […]
स्तन क्यान्सरको जोखिमबाट बच्ने उपायहरु
स्तन क्यान्सरको जोखिम महिलाहरुमा बढी हुने गर्दछ । यो एउटा यस्तो घातक ट्युमर हो जुन महिलाहरुको स्तनको तन्तुबाट शुरुवात हुने गर्दछ । अहिलेसम्म यो घातक रोगबाट बच्ने विशेष उपाय पत्ता लागिसकेको छैन तर पनि दैनिक आहार ब्यवहारमा सामान्य परिवर्तन गर्दा स्तन क्यान्सरको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । दैनिक मदिरा पिउने बाँनी छ भने त्यसलाई तुरुन्त […]
हिन्दू शास्त्रअनुसार महिलाहरुलाई लक्ष्मीको दर्जा दिइन्छ । महिलाहरु खुशी र सुखी भएको घरमा सधै लक्ष्मीको बास हुने मान्यता राखिन्छ । यी अंग ठूलो भएका महिलाहरु भाग्यमानी हुन्छन घाँटी शास्त्रका अनुसार लामो घाँटी भएकामहिलाहरु मेहेनती र आर्थिक रुपले सम्पन्न हुने गर्छन । यी महिलाहरुलाई समाजमा निकै मान–प्रतिष्ठा समेत पाउने अवसर मिल्नेछ । कान शरीरका दुई वटै […]
के तपाई दहीसँग यी ५ चिज खाँदै हुनुहुन्छ ? सावधान !
गर्मी मौसमको स्वादिलो परिकार हो दही । शीतल स्वभावको भएकाले दही तथा दहीबाट बनाइने मट्ठा, मोही आदिलाई गर्मी मौसममा निकै नै रुचाइन्छ । दही स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो मानिन्छ तर यसलाई केही चिजसँग मिसाउनु हुँदैन । अन्यथा फाइदाको साटो नोक्सान हुनसक्छ । यस्ता चिजहरूका साथ दही खाँदा शरीरमा टक्सिन बन्न थाल्छ । फलस्वरूप वाकवाकी तथा […]
सामान्य त हाम्रो समाजले पुरुष र महिलाबीच हुने बैवाहिक सम्बन्ध पछि मात्रै शारिरीक रुपमा परिवर्तन भएको स्विकार गर्छ । कतिपय महिला र पूरुषहरु हर्मोन र वंशाणुगत गूणको कारण पनि शारिरीक रुपमा परिवर्तन हुने गर्दछन् । विहेअघिको शारिरीक परिवर्तनलाई शंकाको रुपमा लिन नहुने चिकित्सकहरु बताउछन् । मानिसको जीवनमा यौन सम्पर्क अपरिहार्य नभएपनि आवश्य चाँहि हो । […]
खोर्सानीका फाईदा र वेफाइदाहरु
खोर्सानीलाई हामी विभिन्न परिकार लगायत अचार पनि बनाएर खान्छौं । यसको प्रयोग सबैले आफ्नो स्वाद अनुसार गर्छन् । प्राय हामी स्वादको लागि खान्छौं तर यसमा थुप्रै किसिमको फाइदाहरु रहेको हुन्छ, जुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ । रातो खोर्सानिले ग्यास्ट्रिकलाई केहि हद सम्म कम गर्न मदत गर्छ । पिरोले शरीरलाई न्यानो बनाउँन मदत गर्दछ र […]
पाइल्सका रोगीका पछिल्लो समय दिन-प्रतिदिन बढिरहेका छन् । पाइल्सका कारण मलद्वार दुख्ने वा पोल्ने हुन्छ । तर पाइल्सका रोगीले केहि घरेलु विधि अपनाउन सके धेरै उपयोगी हुन सक्दछ । पाइल्सका रोगीले निम्न विधि अपनाएर राहत महशुस गर्न सक्दछन् : घ्यु कुमारीको गुदी पाइल्सका रोगीका लागि धेरै उपयोगी हुन्छ । त्यसैले विस्तारै घिउकुमारीको गुदी लगाउने जसले […]
सामान्यतया अन्य बेला चुरोटको धुवा नजिक आउँदा नाक थुन्नेहरु मदिरा पिउदा हातमा चुरोट सल्काउँदै धुवा उडाउने गर्दछन् । तर व्रिटेनका अनुसन्धानकर्ताले मानवीय स्वास्थ्यका लागि मदिरा पिउदा चुरोट पिउनु सवैभन्दा बढि खतरनाक हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । ७५० मिलिलिटर मदिरा पिउँदा ५ चुरोट पिउने ब्यक्तिलाई क्यान्सरको बढि खतरा हुने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार रक्सी […]
यदि तपाई दिनदिनै फलफूलको जुस पिउनुहुन्छ भने क्यान्सरको खतरा हुन् सक्छ
दिनदिनै सोडा पिउँदा तपाईंको तौल बढ्छ अनि क्यान्सरको पनि खतरा हुन्छ । तर सोडा जस्तै गरी फलफूलको जुस पनि दिनदिनै पिउँदा क्यान्सरको खतरा हुने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनलाई मान्ने हो भने गुलियो नभएको फलफूलको जुस दिनको १०० मिलिलिटर पिउँदा पनि क्यान्सरको खतरा १८ प्रतिशतले बढ्छ । अनि […]
गर्मीमा पसिनावाट बच्ने उपायहरु
गर्मी मौसम सुरु भइसकेको छ । यो मौसममा बढी पसिना आउने हुँदा यसले हाम्रो शरीरलाई असर गर्छ। पसिनाका कारण ऐक्सेसिम स्वेटिङ नामक रोग लाग्न सक्छ। शरीरबाट बढी पसिना निस्किएर छाला लगातार भिजिरहे त्यो आफैँमा एक प्रकारको रोग बन्छ। गर्मी मौसममा चर्काे घामका कारण हामीलाई छालाजन्य विभिन्न रोग पनि लाग्ने गर्छन्। गर्मीबाट शरीरलाई जोगाउन उपाय केही […]
स्त्री पुरुषको कुन अंगमा कपाल हुनाले शुभ अशुभ हुन्छ त्यो जान्नु पनि एउटा कौतुहलतको विषय हो । ज्योतिषिय विज्ञानका अनुसार महिलाको हातमा रौहरु हुन अशुभ मानिन्छ । त्यस्ता महिलाहरु ज्यादा रिस भएका र सानो सानो कुरामा धेरै रिसाउने गर्छन् । सानो समस्या परेपनि त्यसैमा अड्केर बस्ने बानी भएका हुन्छन् हातमा रौ भएका महिलाहरु । समय […]